Android App Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
Iyo Moroccan Holocaust nyaya paWikipedia haina kubvira yataura nezvevasungwa vevasungwa mumarenje pakafira maJuda. Chirangaridzo chedu chakaparadzwa neMoroccan Ministry of the Interior mushure megore rekuvaka. Neizvi takaunza nyaya yekumanikidzwa kuita basa munhoroondo yeMorocco kuWikipedia kuitira kuti tirwisane nenhoroondo yekunyepedzera uye kupokana neSemite. Uye izvo kunyangwe zvaive zvekumisikidza hunyanzvi kubva pakutanga kuratidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu kweChina vachipesana neveUyhurhur.
Anodiwa Highness Mohammed VI, Art haisi mhosva. Sangano redu reGerman rekodzero dzevanhu & nekusimudzira hunyanzvi netsika nekukurumidza zvinofanirwa kunyunyuta kwauri nezve kutyorwa kwakanyanya kwekodzero dzevanhu kuMorocco. Izvo zvese zvakatanga ne mobile mobile kicheni ye Africa, iyo yako tsika maofficial muTangier vakatora kubva Chivabvu 2018 nekuti isu tinofanirwa kuda kutengesa masobho tichitengesa muMarrakech. Kwegore ikozvino taona vanhu vachidya kubva mumakani emarara uye kicheni yedu yemuto ingadai yakabatsira vamwe vanhu kuguta. Nei machinda ako arikuputsa bindu remuartist? Vakuru vako havana kupindura kuchikumbiro chekuvaka munaGunyana 2018. Mazuva ese takaedza kutanga kusangana neako manejimendi nenzira dzese dziri munyika kubva kuParamende kuburikidza nemamishinari ako eMoroccan, ayo asingashande. Havana kumbopindura. Muna Zvita 2018, wedu wePixelHELPER mushandi wekuvandudza Tombia Braide akafa nekuti aive akatsamwa nezve hunhu hwevakuru zvekuti akafa nechirwere chemwoyo. Ehe, akavigwa seyeuchidzo pasina munhu aripo uye mhosva yacho yakaiswa kune vaMoroccan vanoviga. Isu takavaka sundial mukumurangarira, yakaparadzwa nemagandanga ayo.Takaisa mari ye100.000 muMorocco mukati megore rimwe chete. Takashanda bhekari rechingwa chakakangwa mugaba kuti tione kugadzikana kwechikafu muAfrica uye takapa musha wedu chingwa chemahara mazuva ese. Yako gendarmerie inotora vashanyi kubva kwatiri kuenda kukamba yemapurisa nechikonzero chekuti zvinorambidzwa kutishanyira. Kubvunzurudzwa nezvipomerwa muenzi wedu angave mutengesi uye Freemason haifanire kubvumidzwa. Ipapo pakava nembama kumeso kwemushanyi wedu. Vatori venhau vakatadziswa kushanyira nzvimbo yedu nemapurisa kakawanda. Kunyangwe isu tiine magwaro ese ekuwana iyo investor vhiza munyika yako, kusanganisira iyo 3 gore rendi nesarudzo yekutenga, mapurisa ako anoda kutidzinga zvakaoma. Tinodaidzira kuripwa kwekuparadzwa uye kuvakwazve kwechingwa chakakangwa mugaba. Iwe unofanirwa zvakare kuzivisa emunharaunda mapurisa ako kuti maartist haasi magandanga. Nekuti ndozvatinoitwawo. Vashandi vedu vanotyisidzirwa neMkadem, ruoko rweruboshwe rweCaid, kwete kuvhara maburi emadziro edu ekunze. PaSugar Festival, timu yedu yaida jekiseni rerabi nekuda kwekurumwa nembwa. Nehurombo, bazi ravo rezvehutano muAit Ourir neMarrakech rakavharwa. Isu tinodaira zviuru zana zveeuro zvekuvakazve uye kukumbira ruregerero kubva kumukuru wemapurisa muAit Ourir uye caid muAit Faska. Ndiani asingambotauri pachedu asi anongotaura nevanoona. Nekuda kwemhirizhonga yemapurisa inoitirwa muenzi wedu, tinoda vashandi zana vevatinosarudza kwemakore zana kubva kuAit Faska & Ait Ourir kuti vashande pamapurojekiti edu ehunyanzvi.
Pakazara paive nemisasa gumi nemana yemhando dzakasiyana nevarume zviuru zvina muFrance yekudzivirira kuMorocco. Wechitatu aive maJuda emarudzi akasiyana siyana. Vasungwa vese vaive varume kunze kweSidi Al Ayachi, yaive nevakadzi nevana. Mamwe makambi aichengetwa majeri, kureva majeri chaiwo evanopokana nehutongi hweVichy hutongi. Vamwewo ndivo vainzi makambi ekufambisa evapoteri. Zvimwe zvakachengeterwa vashandi vekunze. Kana maJuda mumusasa weBou Arfa uri pasi peVichy, iyo Transsahara Railway yakave chiratidzo chakakosha chekudyidzana neTatu Reich. Naizvozvo, pakanga paine kudiwa kukuru kwevashandi. Vaya vaisakwanisa kushanda zvakanyanya vakafa.
Iyo Berguent (Ain Beni Mathar) imba yekuchengetera yaishandiswa neindasitiri yekugadzira Dhipatimendi. Yakanga yakachengeterwa maJuda chete (155 muna Chikunguru 1942 uyezve mazana mana kutanga kwa400 zvinoenderana neshumo yeCRI). "Asi kunyaradzwa pakunamata uku hakuna kudzikisira chokwadi chekuti musasa weBergue waive pakati pevakaipisisa," akadaro Jamaa Baida. Red Cross yakanzi ivhare, maJuda aigara muBergued, kunyanya kubva kuCentral Europe, vakambotizira kuFrance. Vekunze veLegion vanozvipira vakadzikiswa mushure mekukundwa kwa1943 uye ndokuzopinzwa "zvikonzero zvekutonga". Izvi ndizvo zvakaitika kuna Saul Albert, mugari weTurkey akauya kuFrance muna 1940. Akaiswa mutirongo muBergua kusvika aburitswa munaKurume 1922. Mune dhayari yake anonyora kuti:
“10. Kukadzi (1941): Matombo akaputsika zuva rese. Kurume 2nd ...: Handover kuboka rechishanu nemaGerman maJuda. Handizvifarire zvachose. Basa harina kufanana; Isu taifanirwa kugadzira ballast ... Kubvumbi 6: Hatichakwanise kutakura hupenyu huno. Ndine fivha, zino ... ... Gunyana 22nd: Rosh Hashanah: Hapana munhu aida kushanda ... Gumiguru 1: haana kudya ... "
MuBoudnib, taundi diki revagari zviuru gumi, varwi vemauto varipo ndizvo zvapupu zvekupedzisira kumusasa wemauto eFrance. Vagari vechikuru vanochengeta zvidimbu zvendangariro: "Ini ndinogona kukuudza zvinhu zviviri zvechokwadi. Yokutanga ibapiro reBoudnib, iro rinonyanya kuumbwa nemaJuda. Chechipiri ndechekuti vazhinji vemisasa yeguta vakadzidziswa kuchikoro chepuraimari ”(Tel Quel Magazine No. 10.000, Chivabvu 274-19, 25).
Maurice Rue, mutori wenhau wechiKomonisiti, akasungwa ipapo. Akatitaurira kuti "pavasungwa makumi mana, makota matatu vaive maKomonisiti, maSocialist uye maGaullists makumi mana makumi mana vasati vasvika kwemwedzi mishoma."
Chiratidzo chinopesana nevanotambudzwa vashoma pasirese. Kuvakwa kwechirangaridzo chekutanga cheHolocaust kuNorth Africa kunoitirwa kushanda sosi yeruzivo nezveHolocaust yezvikoro nevanhu.
Kana bhuru rimwe nerimwe rakakosha mazwi chiuru. Musi waChikunguru 17.07th, kuvaka kwakatanga pachirangaridzo chekutanga cheHolocaust kuNorth Africa. Isu takamisa matombo ekupa vashanyi mu labyrinth yegrey block manzwiro ekushaya rubatsiro uye kutya kwerufu izvo vanhu vaive nazvo mumisasa yevasungwa kumashure ikako. Tinoda kugadzira nzvimbo kuNorth Africa iyo inounza kurangarirwa muzera redhijitari. Nerukova ruri, vatariri varipo pane iyo saiti yekuvaka uye vanogona kukanganisa huwandu hwevashandi nemablock ekuvakwa nemipiro yako. Kunyanya paunotarisa nekupa, chiyeuchidzo cheHolocaust chinova chikuru.